server တွေအကြောင်းဆွေးနွေးကြရအောင် - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
14-07-2009, 06:09 PM
ပို့စ်4ခုအတွက် 127 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော် က လူသစ် တစ်ယောက် ပါ ..... ဒီနေ့ တော့ အချိန် မရတော့လို့ ဒီမျှတင်ပါ ...
နောက်ရက်တွေမှာ .... DNS server က စပြီး server ပေါင်း မြောက်များစွာ ကိုဘယ်လို install လုပ်မလဲ ဘယ်လို configure လုပ်မလဲ ဆို တာကို ကျွန်တော် သိသလောက် ဖစ်ညစ်ပြီး သိတဲ့တတ်တဲ့ အကိုအမများနှင့် တကွ ဒီ myanmar family မှာ ကျွန်တော် လို ပညာရှာမှီနေတဲ့ ညီအကိုမောင် မောင်နှမများအားတင်ပြဆွေးနွေး သွားချင်ပါတယ်လို့ မိတ်ဆက်ပြောကြားလိုပါတယ် ... ကျွန်တော် တင်ပြဆွေးနွေးသည်များတွင် လို့အပ်ချက်တွေ့ရှိခဲ့လျှင်လည်း ဖြည့်စွတ် ဆွေးနွေးပေးကြပါလို့ မေတ္တာ ရပ်ခံလိုက်ရပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင် 41 ဦးတို့မှ ဖိုးသိကြား အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစံငြိမ်း, ကိုကျော်လှိုင်, ထူး​နေ​အောင်​, ဒဿဂီရိ, နီထွန်းဦး, ပွင့်ဖူးမွန်, ဖယောင်း, မင်းခန့်ကျော်, ရဲထွတ်, လင်းထိန်, လူမုန်း, သက်ပိုင်ဦး, အလွမ်းမင်းသား, အနိုင်းမဲ့, ဇော်ရဲပိုင်, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), မောင်ပေါ်ဦး, သေးသေးလေး, အောင်လံလေး, ဖြိုးယံလေး, aung lwin, AZM, bonge, chanlay, godoflove, ko myo, kyawswarl, lawliet, minthike, minthumon, naingthu, phoetharlay, phyomyintthein, thura.it, thureinsoe, tu tu, wunna313, yawnathan, Ye Naung, zan zan, zo
Find More Posts by ဖိုးသိကြား
ပြန်စာ - server တွေအကြောင်းဆွေးနွေးကြရအောင်
အင်း ဒီနေ့ တော့ server တွေ အများကြီးထဲ က DNS အကြောင်း လေးကို စတင် ဆွေးပါတော့ မယ် ......
DNS Server ( Domain Name Server ) ... သူ့ရဲ့အဓိက အလုပ် ကတော့ name နဲ့ IP တွေကို match ဖြစ်အောင် လုပ်တာပါ .... ဥပမာ .. www.google.com ဒါက သူ့ရဲ့ name ပါ ... သူတကယ် အလုပ်လုပ်နေတာက IP 74.125.153.105 ကနောက်ကွယ်ကနေ အလုပ်လုပ်နေ တာပါ ..... တကယ်လို့သာ
ကျွန်တော်တို့ က DNS services ကြီးသာမရှိဘူးဆိုရင် IP no. တွေသိမှသာ Internet ကြည့် ခွင့် ရကြမှာပေါ့...
လူတွေအားလုံးကလည်း မှတ်ရလွယ်တဲ့ www.google.com ဆိုတဲ့ namely system ကို နှစ်သက်ကြမှာပါ.... အဲ့ဒါကြောင့်လဲ DNS server ကို ထောင်ကြရပါတယ် ..... ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ DNS ဆိုတာနဲ့သိရမှာ က name နဲ့ IP ကို matchping လုပ်ပေးတဲ့ services ဆိုတာပါဘဲ ........
အောက်ပါအသင်းဝင် 58 ဦးတို့မှ ဖိုးသိကြား အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစံငြိမ်း, ဆလိုင်းသန့်ဇော်ဝင်း, ဆလိုင်းထွန်းထွန်း, ထူး​နေ​အောင်​, ဒဿဂီရိ, ပုလဲနက်, ပွင့်ဖူးမွန်, ဖူးလေး, ဖယောင်း, မင်းခန့်ကျော်, ရဲထွတ်, လူမုန်း, ဟိန်းထက်ဇော်၅၂, အလွမ်းမင်းသား, ဇော်ရဲပိုင်, ဇော်ဝင်းသိန်း, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), မောင်စိန်ရွှေ, မောင်ပေါ်ဦး, သေးသေးလေး, အောင်မင်းကို, အောင်မိုးထွန်း, အောင်လံလေး, အောင်ကျော်မျိုး, အေးမင်းမောင်, သြကောင်, ဖြိုးယံလေး, ​ဝေဇင်​ကိုကို, aungphyo, AZM, blacck, bonge, gandamar, godoflove, Hla Myo Thein, khoungchee, ko myo, kyawswarl, lawliet, lifemark, minthike, minthuhan, minthumon, nyowin, phoetharlay, phyomyintthein, rutile.geol, saiwaihin, sAnDViper, spaceboy, thura.it, thureinsoe, thuzaraung, tunlinaungt456, viva, wunna313, yawnathan, zo
လုပ်ပါ...ဆက်လက်ရေးသားပါ။ အားပေးနေပါတယ်။ အခုလို အများသိအောင် ပြုလုပ်ပေးတဲ့ စေတနာကို လေးစားပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ spaceboy အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
လင်းထိန်, ဇော်ဝင်းသိန်း, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), မောင်စိန်ရွှေ, အောင်လံလေး, minthike, thura.it
ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒါဆို ရင် ကျွန်တော် တို့ ခရီးဆက်ကြမယ် ဗျာ... ကျွန်တော် တို့ Installation အတူတူ စလုပ်ကြမယ်နော်.......... ကျွန်တော် ကြိုတင် ပြောချင်တာကတော့ ကျွန်တော် တို့ တင်ထားတဲ့ window CD
အခွေလေးတော့ ကို့မှာအဆင့်သင့် ရှိစေချင်ပါတယ် ... ဥပမာ ကိုယ်သုံးတဲ့ Window က Window Server 2003 service part 1 ဆိုကြပါဆို .. အဲ့ဒီတော့ Window Server 2003 service part 1 Installation CD လေးကို ဆိုလိုတာပါ .... ကဲ အပြောလေးတွေလျှော့ပြီး အလုပ်လေးနဲ့ သက်သေပြလိုက်ကြရအောင်ဗျာ........
1။ Start - Control panel - Add Or Remove Programs ထဲကို အဆင့်ဆင့် သွားရပါမယ်
2။ Add Or Remove Programs ကနေ Add/ Remove Windows Components ကို click
3။ အဲ့ဒါဆို Add/ Remove Windows Components ရဲ့ wiz လေးပေါ်လာပြီ ပေါ့ အဲ့ထဲ က Network services ကို select ပေး ( Check Box ကို မ on ခိုင်းဘူးနော် ) Detail ကို Click
4။ Domain Name System ကို Check Box ကို On (On တယ် ကို အကွက်လွတ် လေးထဲမှာ အမှန်ခြစ်လေးပေးခိုင်းတာပါ )
5။ Ok ပေး ပြီးထွက် Next ပေး Finish ပေး အဲ့မှာ ကျွန်တော် အစောပိုင်း ပြောတဲ့ CD ကိုတောင်းပါလိမ့်မယ်
CD ထည့်ပေးလိုက်ရင် ဆက်ပြီး install လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်
ညီအကို မောင်နှမအားလုံး လဲ ဘာကြောင့် DNS services ကိုသုံး လည်း ဆို တဲ့ အဓိပွါယ် တစ်ခြားပုံစံ နားလည် ထားရင် ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော် ပြောတာမှားနေရင် ခွင့်လွတ်ပါ .... နောက်ရက်မှ configure လုပ်တာ ကိုဆက်ပြောပါ့မယ်......
အောက်ပါအသင်းဝင် 27 ဦးတို့မှ ဖိုးသိကြား အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဒဿဂီရိ, မင်းခန့်ကျော်, လင်းထိန်, လူမုန်း, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), မောင်စိန်ရွှေ, သေးသေးလေး, အောင်လံလေး, aungphyo, AZM, bonge, gandamar, htikewailinn, kyawswarl, minthike, minthumon, phyomyintthein, soemaung, spaceboy, thuboy09, thura.it, thureinsoe, viva, wunna313, Ye Naung, zawheinwin2010, zo
အခု linux dns ဖြစ်တဲ့ bind က windows အတွက်ရနေပါပြီ။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် သူ့ကို ဘယ်လို configure လုပ်ရမယ်ဆိုတာသိချင်ပါတယ်....ခင်ဗျာ.....
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ Zeiya အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), သေးသေးလေး, aungphyo, godoflove, minthike, thura.it
DNS အကြောင်း အရမ်းသိချင်ပါတယ်။
ဥပမာ GlobalNames Zone
တွေ အကြောင်း အသေးစိတ် သိချင်ပါတယ်။
zone တွေ ဘယ်လို replicate လုပ် တယ်ဆိုတာပိုသိချင်ပါတယ်
ဖြစ်နိုင်ရင် DNS migration အကြောင်းပါ ရှင်းပြပေးပါ။
မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), minthike, thura.it
30-07-2009, 04:49 AM
ဒီနေရာလေးမှာ ကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက်ဆိုရင် server အမျိုးအစားပေါင်း ၁၄ မျိုးရှိပါတယ်။အဲ ဒီအမျိုး အစား တွေက ဘာတွေလည်း ဆိုရင်။
တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့မှာ တစ်မျိုးစီရဲ့ အသေးစိတ်လုပ်ဆောင်ချက်တွေရှိပါတယ်။ အဲဒီလုပ်ဆောင် ချက်တွေကိုတော့ ကျွန်တော်နောက်နေ့မှ ဆက်လက်ဆွေးနွေးပေးသွားပါမယ်။ ညလည်း နက်နေလို့ပါ။ ကျွန်တော် မဆွေးနွေးခင်အကြား လေးမှာ သိတဲ့ ညီအကို မောင်နှမ များမှ လည်း ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေး သွားနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ။
အောက်ပါအသင်းဝင် 23 ဦးတို့မှ soemaung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစံငြိမ်း, ဒဿဂီရိ, မင်းခန့်ကျော်, ရဲထွတ်, လူမုန်း, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), သေးသေးလေး, ​ဝေဇင်​ကိုကို, aungphyo, AZM, hninn nu, minthike, minthumon, nyowin, phyomyintthein, PyaitSone, sAnDViper, smalllay, thura.it, thureinsoe, viva, wunna313, Ye Naung
ပို့စ်4ခုအတွက် 23 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကဲဗျာ ဖိုးသိကြား Account က လုံးဝ ၀င်လို့ မရလို့ မရောက် ဖြစ်တာတော်တော် ကြာသွားပါတယ် ..........
အခုဆက်လက်ပြီးတော့ ကျန်နေတဲ့ အပိုင်းလေးဖြစ်တဲ့ Zone တွေအကြောင်းလေး ဆက်လက် ဆွေးနွေးလိုက်ကြရအောင်ဗျာ ( ကိုးရီးယား ကားလိုဘဲ နော် ဟဲ ဟဲ .... )
- Forward look up Zone ရဲ့ အဓိကတာဝန်ကတော့ ... Name မှ IP ကို Match လုပ်ပေး တာပါ .....
- Reverse Look up Zone ကတော့ IP မှ Name ကို match လုပ်ပေးတာပါ .......
အော် ကြော်ငြာဝင်လိုက်အုန်းမယ် ... Zone Type ( ၃ ) မျိုး ရှိတယ်ဆိုတာလေပါ
- Primary Zone - အခုမှ စလုပ်မယ်ဆိုရင် ဒါနဲ့လုပ်ရမယ်ပေါ့
- Secondary Zone - ဒါကတော့ရှင်းပါတယ် DNS Server ထိုင်ပြီ.ရှိနေရင် ပေါ့
- Styb Zone - အင်း ဒီကောင်ကတော့ store လုပ်ယုံ - permission ကလည်း read only ဘဲ ရမယ်ဗျ.....
ကဲကဲ ပေတွေရှည်နေတာနဲ့တင် ဆွေးနွေးဖို့ စောင့်နေတဲ့ ညီအကို မောင်နှမ တွေစိတ်မရှည်ရောပေါ့.......
-- Configure လေး စလိုက်ရအောင်နော်
-Start - Administrative Tool - DNS ကိုဝင်လိုက်ရအောင်ဗျာ
-ကို့ DNS server ရဲ့ + sing လေးကို ဖြေချ လိုက်ရင် Forward Lookup Zones ဆိုတာလေးကို
တွေ့ ရပါမယ် .... အဲ့ပေါ်မှာ Right Click - New Zone ကိုယူလိုက်ပါအုန်း
ထုံးစံ အတိုင်း next -primary zone ကို မှတ် -Next -Zone Name ပေး ( name တစ်ခုခုပေါ့)
- next - next - finish ပေါ့ ပြီးရင် တော့ Forward Lookup Zone အောက်မှာ ကိုပေးလိုက်တဲ့
နံမယ်လေး နဲ့ Folder လေး ရောက်နေမယ် အဲ့ပေါ် မှာ Right Click - New host ( A ) -မှာ
Server Name ရယ် 192.168.0. x ပေး ok ဒါဆိုရင် တော့ Forward Lookup Zone
ဒီနေ့တော့ အချိန်မရတော့လို့ ဒီလောက်ဘဲ နော် ......
အောက်ပါအသင်းဝင် 19 ဦးတို့မှ thetkazaw အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဒဿဂီရိ, လင်းထိန်, လူမုန်း, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), အောင်လံလေး, ကြက်ဥခေါက်မုန့်, aung lwin, aungphyo, AZM, godoflove, kyawswarl, minnminnnaing, minthike, minthumon, sAnDViper, thura.it, viva, wunna313, zo
Find More Posts by thetkazaw
အကိုတို့ရေ .. ဆက်လက်ဆွေးနေပါဦး....စောင့်မျှော်လျှက် .. ISA Server အကြောင်းလေးနဲ့ AD အကြောင်လေးပါ .. မြန်မာလိုလေး ရှိရင် share ပေး ကြပါခင်ဗျာ..
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ မောင်ယုမောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by မောင်ယုမောင်
Originally Posted by မောင်ယုမောင်
ကို မောင်ယုမောင် ခင်ဗျား .....
အကို အမ တွေ ရှင်းပြထားတဲ့
ဒီလင့် လေးကို ဖတ်ပေးပါ ခင်ဗျား ....
ကို မောင်ယုမောင် အဆင်ပြေပါစေ ....
bonge, minthike, minthumon, sAnDViper, thura.it
Mail Server အကြောင်းစာအုပ်များရှိရင် တင်ပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ..
ကျဆင်းနေသော ရေစက်ရေပေါက်များသည် နောက်ဆုံးတွင် ကျောက်တုံးကို တိုက်စား၍ သွား၏။[CENTER][/CENTER]
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ကိုကိုထက် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...အခုလို လေ့ လာခွင့် ရတာကိုလေ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ march အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
28-12-2010, 05:18 PM
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ၀ိုင်းချစ်လေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ၀ိုင်းချစ်လေး
29-12-2010, 01:04 PM
Domain Server အကြောင်းလေး သိချင်လို့ပါ... configure လုပ်တာလေးတွေကို PDF လေးနဲ့
အခုလိုဆွေးနွေးပေး လင့်လေးတွေ တင်ပြပေး သင်ကြားပေးကြတဲ့ အကို အမ ညီ ညီမ များကိုကျေးဇူးတင်လျက်ပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ shinli အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
DJBDNS မှာပါတဲ့ TinyDNS နဲ့ DNS cache configuration အကြောင်းနဲ့
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ngaraa အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
21-06-2011, 12:38 AM
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ thuya အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Originally Posted by thuya
ကို သူရ ....ဆရာဦးဇော်လင်း ရဲ့ server2003
Last edited by thureinsoe; 21-06-2011 at 08:42 AM..
မျိုးဟန်ထက်, အောင်မိုးထွန်း, aungphyo, bagothar85, g00gle, minthike, minthumon
ကို သူရ ....ဆရာဦးဇော်လင်း ရဲ့ server2003
လင့်လေး တချက်လောက်ပြန်စစ်ကြည့်ပေးပါဦး။ ကျွန်တော်တော့ လင့်ကို မရောက်ပဲ့ Quote လုပ်ထားတဲ့နေရာကိုပဲ့
လင့်ရောက်နေ့လို့ ။ အကိုတို့ အနေနဲ့ လင့်တင်တော့မယ်ဆိုရင် တင်ပီးရင် လင့်လေးတချက်လောက်ကို ပြန်ပြန်စစ်ကြည့်ပေးပါ။ ဒါဆို အမှားအယွင်းနည်းတာပေါ့
မျိုးဟန်ထက်, မောင်ပေါ်ဦး, arkaraung, aungphyo, g00gle, KznT, minthike, minthumon, thureinsoe
24-06-2011, 01:35 AM
ဆိုပြီး google လိုက်ရင် အောက်ကလင့်ကို တွေ့မယ်လေ ကိုသန့်ဇင်ဌေးရဲ့
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ minthike အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစံငြိမ်း, မျိုးဟန်ထက်, သန့်ဇင်ဌေး, အောင်မိုးထွန်း, azp09, bagothar85, g00gle, minthumon, thureinsoe
28-06-2011, 01:40 AM
DHCP server အကြောင်းသိကျလာမသိဘူး။ ကျွန်တော်တော်သေသေချာချာ မသိတာနဲ့ လေ့လာမိတယ်။
DHCP server ကဘာတွေဝန်ဆောင်မူပေးလဲဆိုတော့ Network ထဲမှာပေါနော် DHCP server ကို
Run ပေးထာတာ နဲ့ ကျန်တဲ့ Client တွေကို Auto IP Address ထည်ပေးတာပါ။
သူကဘာတွေအားသာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ Network ငယ်လေးတွေ(Client 10)လုံးလောက်
ပဲရှိတယ်network တွေမှာဆိုရင်တောပြသနာမရှိဘူးလေ၊တစ်လုံးခြင်းဆီ IP လိုတ်ထည်ပေးလိုတ်မှာပေါ့။
စက်အလုံးတွေအများကြီး ၃၀၀၊၄၀၀ လောက် အဲထက်များရင်လဲများမှာပေါ့။အဲ့ဒါဆိုရင်တစ်လုံးခြင်းဆီလိုတ်ထည်ဖို့ ကမလွယ်တော့ဘူး။
အဲအခါမှာDHCP server ကိုသုံးမှာပေါ။သူဘာသူအော်တိုထည်ပေးသွားမှာပါ။
ကျွန်တော်ရဲ့ ဖော်ပြမူလေးကမပြည်စုံပါဘူး။ ညီ/အကိုများရောက်ဆွေးနွေးပေးပါဦး။
သန့်ဇင်ဌေး, အေးမင်းအောင်, g00gle, kyawswarl, minthike, minthumon
28-06-2011, 03:06 AM
နက်ဆိုင်ဖွင့်ထားပါတယ်.. သူရဲ့မိုရမ်း Gateway password ကို သူက အရင်က defult အတိုင်းထားထားလိုက်ပါတယ် အရင်ကတော့ပြောင်းထားတယ်ကိုယ်ပိုင်ပါ့ဝတ်ကို သူမေ့နေတုန်းကိုဝင်ပြောင်းသွားတယ် အခုပြောင်းလိုက်တဲ့သူ၇ဲ့Defult password က ဝင်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်နေပါတယ်.. အခုပြောင်းသွားတဲ့သူက မိုရမ်းထဲကို ဝင်မွေလို့ရနေပါတယ်..အင်တာနက်ဆိုင်ဆိုတော့ဘယ်သူလက်ချက်လဲဆိုတာလဲမသိ
ဘူးဖြစ်နေတယ်... http://192.168.5.100:8080/xWebGateway.cgi အဲ့တာက သူရဲ့ defult gate way ပါ..အရင်ကတော့ အော်ပရာဆိုတဲ့ Password နဲ့ဝင်လို့ရပါတယ်..
အခုတော့လုံး၀၀င်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်နေလို့ပါ... မိုရမ်းကို reset ချရင်တော့ရပါတယ်
ဒါပေမယ့်လောလောဆယ်သူလဲဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ မိုရမ်းကို reset မချ
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ အေးမင်းမောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
sever 2003 အင်တာနက်ဆိုင်မှာသုံးချင်လို့ဘယ်လိုင်လုပ်ရလဲ..နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုင်မှာကလိုင်းကနှစ်လိုင်းရှိနေတော့သူငယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ နိုင်နိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by နိုင်နိုင်
အကိုရေ window 2003 သုံးမယ်ဆိုတောအင်တာနက်ရှယ်ယာပေးဖို့ လား?
ISA sever ထိုင်သုံးရင်အဆင်ပြေမှာပေါ။
Windows server 2003 လိုချင်ရင်ဒီလင့်မှာ
ISA server အသုံးပြုဖို့ ကဒီလင့်မှာ
ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာလဲ window server 2003 တင်ပီတော့ ISA server သုံးထားတယ်အကိုရဲ့ 
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ မျိုးဟန်ထက် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
g00gle, minthike, thureinsoe
Open source သုံးကြည့်ပါ့လား အဲဒါဆိုအဆင်ပြေတယ်.. PFsense သုံးကြည့်ပါလား.. အဲဒီမှာ Loadbalance လုပ်လို့ရတယ်.. Security အနေနဲ့လည်းကောင်းတယ်.. ပြီးတော့ ISA မှာလိုမျိုး Cache တွေရှင်းပေးရတာမျိုးမလုပ်ရတော့ဘူး.... အများကြီးပဲ သူ့နဲ့လုပ်လို့ရတာတွေကတော့.. ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံအရ ကျွန်တော်က တော့ အဲဒါပဲသုံးတယ်...
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ ngaraa အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
bonge, g00gle, minthike, Zin Ko
19-07-2011, 08:11 AM
ဒီဖိုရမ်ကို ၀င်ရောက်လေ့လာရတဲ့အတွက် ပညာတွေတိုးပွားစေပါသည်။
Network ပိုင်းကိုလည်း ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ mmm3 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
13-08-2011, 01:45 PM
အောက်ပါအသင်းဝင်မှုကိုကိုထွေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts byုကိုကိုထွေး
ပိုစ် ၂၁ ကရေးထားတာပြည်ပြည်စုံစုံမဖြစ်ဘူဖြစ်နေတယ်။
DHCP ဆိုတာ Dynamic Host Configuration Potocol ဖြစ်။ DHCP ကို Run ထားရင် host ထဲမှာ
IP address , subnet ,Gateway စသည် တို့ကိုအလိုအလျှောက်ဖြည်စွတ်ပေး။ Network Administrator နဲ့
User တွေကိုအလုပ်မရူပ်စေတောဘူးပေါ့။ IP addreess တွေကို DHCP server က Auto ချပေးတဲ့အတွတ်
ဒီအဆင်က ပထမဦးဆုံး ကွန်ပျူတာသည် DHCP Run ထားတဲ့ Network ကိုချိတ်ဆတ်လိုတ်တာနဲ့ IP information ရှိရန် Broadcast massage လွတ်လိုတ်ပြီးတော့ network အတွင်းမှာ DHCP ဆာဗာကိုရှာဖွေပါတယ်။
Client Computer ကနေ ပိုလွတ်လိုတ်တဲ့ brodcase massage ကိုရရှိတာနှင့် server ကနေ
DHCP Offer massage ကို Client computer ဆီကိုပြန်ပို့ပါတယ်။ DHCP Offer massage
ထဲမှာတော့ server မှာတော့ ဘယ်လိုဘယ်လိုတွေသတ်မှတ်ထားတယ်။ဘယ် IP တွေတော့ဖြင့်ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Server နေပို့လိုတ်တဲ့ DHCP Offer massage ကို client ကွန်ပျူတာကရရှိတာနှင့် server ကိုတောင်းခံလွာပြန်ပြီးတောပိုလွတ်လိုတ်တာပါ။ ဟုတ်လားပေါ့အဲ့ဒီ IPတွေရနိုင်လား ဒါဆိုရင်ကျွန်
တော်ကို IP ပေးပါတော့ပေါ့။
နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနှင့်တော Server ကနေ DHCP Acknowledge(DHCP packet) ကိုပြန်ပို့လွတ်လိုက်ပါတယ်။Client computer ကိုစပြီး IP တွေချပေးလိုတ်တာပေါ့။ အဲ့မှစတင်ပြီးတော Server နှင့် client computerစတင်ချိတ်ဆတ်မိသွားပါတယ်။
Client computer ကနေအသုံးပြုသော Command တွေကတော့
Ipconfig /all ဒါကတော့ server ကနေချပေးထားတဲ့ IP တွေကိုကြည်တာပါ။
Ipconfig /release ဒါက အဲ့IP တွေကိုဖျက်ပစ်လိုတ်တာ အဲ့အတိုင်းဆိုသုညတွေချည်းဖြစ်သွားတာပေါ့။
Ipconfig /renew ဒါဆိုရင်တော server ကနေ Ip အသစ်ပြန်ချပေးအောင်လုပ်လိုတ်တာပါ။
Last edited by မျိုးဟန်ထက်; 24-09-2011 at 09:01 AM..
အောင်မင်းကို, azp09, bonge, g00gle, hninn nu, minthike, Zin Ko
Mail Server လေး တင်ပေးပါအုံး.... အစဆုံး
13-11-2013, 10:02 AM
ကျွှန်တော်က အခုမှ လေ့လာစပါ. Vpop ဘယ်လိုအလုပ် လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသိချင်ပါတယ်။ ဘယ်မှာတင်ရမှန်းမသိလို့ ဒီမှာပဲဝင်မေးလိုက်ပါတယ်။ Vpop ဘယ်လို အလုပ်လုပ်တယ်..ဘယ်လို အသုံးပြုရတယ်ဆိုတာကို ပြည်ပြည့်စုံစုံလေးသိချင်လို့ပါ.....
AppDev Microsoft SQL Server 2005 (20 CDs) sawjonnie Softwares မျာ3း21-01-2009 09:38 PM
Performasimple server side request and update two elements in the current HTML mmmaung E-books များ028-01-2008 03:47 PM